Ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia mifehy ny fomba nametrahan'i Fyrebox Quizzes, ny fikajiana ary ny fampahafantarana ny vaovao voaangona avy amin'ny mpampiasa (tsirairay avy, "Mpikambana") ao amin'ny tranonkala https://www.fyrebox.com ("Site"). Ity politika politika momba ny tsiambaratelo ity dia mihatra amin'ny tranokala sy ireo vokatra sy serivisy rehetra natolotry ny Fyrebox Quizzes
Fampahalalana momba ny tena manokana
Azontsika atao ny manangona fampahalalana momba ny mombamomba ny tena manokana avy amin'ireo mpampiasa amin'ny fomba maro isan-karazany, anisan'izany, saingy tsy voafetra ihany, rehefa mitsidika ny tranokalanay ny mpisoratra anarana, misoratra anarana ao amin'ilay tranokala, mametraka lamina ary mifandraika amin'ny hetsika, serivisy, endri-javatra na ny loharanon-kevitra ataontsika. azo alaina ao amin'ny tranokalanay. Ireo mpampiasa dia mety angatahina, raha mety, anarana, adiresy mailaka, fampahalalana karatra. Na izany aza, ny mpampiasa dia afaka mitsidika tsy an-tserasera tsy fantatra anarana. Ny fampahalalana momba ny mombamomba ny tena manokana no ataonay avy amin'ireo mpampiasa raha toa ka an-tsitrapo an-tsitrapo izany. Ny mpampiasa dia afaka mandà foana ny hanome fampahalalana momba ny mombamomba ny tena manokana, afa-tsy ny hanakana azy ireo tsy handray anjara amin'ny hetsika manokana mifandraika amin'ny Site.
Fampahalalana tsy mika manokana
Azontsika atao ny manangona fampahalalana tsy mombamomba manokana momba ireo mpampiasa raha sendra mifanerasera amin'ny tranokalanay izahay. Ny fampahalalana tsy momba ny tena manokana dia mety ahitana ny anaran'ny navigateur, ny karazana informatika sy teknika momba ny mpampiasa dia midika fampifandraisana amin'ny tranokalanay, toy ny rafi-pandaminana sy ny mpanome tolotra amin'ny Internet nampiasaina sy fampahalalana hafa mitovy.
Cookies cookies amin'ny Internet
Ny tranonkalantsika dia mety hampiasa "cookies" hanatsarana ny traikefa mpampiasa. Mahazo mofomamy amin'ny zotram-pilany amin'ny alàlan'ny fikarakarana firaketana an-tsoratra ny zotram-pifandraisan'ny mpampiasa azy ary indraindray mba hahitana vaovao momba azy ireo. Ny mpampiasa dia mety hisafidy ny hametraka an-tserasera amin'ny fandavana ny mofomamy, na ny hanaitra anao raha alefa ny mofomamy. Raha manao izany izy ireo dia mariho fa ny ampahany sasany amin'ny tranokala dia mety tsy mandeha tsara.
Fomba ampiasainay ny vaovao voangona
Fyrebox Quizzes dia mety manangona sy mampiasa ny mombamomba ny mpampiasa manokana ho an'ireo tanjona manaraka ireto:
Ho fanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Ny fampahalalana omenao dia manampy anay hamaly ny fangatahana serivisy ho an'ny mpanjifanao sy ny fanohanana ilaina amin'ny fomba mahomby kokoa.
Hanao manokana ny mpampiasa
Azontsika atao ny mampiasa fampahalalana ao anaty fitambaran-trano mba hahalalantsika ny fomba fampiasan'ny mpampiasa anay amin'ny vondrona ny serivisy sy ny loharanom-pahalalana nomena ao amin'ny tranokalanay
Manatsara ny tranokalanay
Azontsika ampiasaina ny valiny omenao hanatsarana ny vokatra sy serivisinay.
Mba hampihenana ny fandoavam-bola
Azontsika atao ny mampiasa ny fampahalalana omen'ny mpampiasa momba ny tenany rehefa mametraka baiko fotsiny izahay mba hanomezana tolotra an'io baiko io. Tsy zarainay amin'ireo antoko ivelany ity vaovao ity afa-tsy ny fahazoana ny serivisy.
Raha handefa mailaka maharitra
Azontsika atao ny mampiasa ny adiresy mailaka handefasana ny mombamomba ny mpampiasa sy ny vaovao farany momba ny baikony. Azo ampiasaina koa izany hamaliana ny fanontaniany, fanontaniany ary / na fangatahana hafa. Raha nanapa-kevitra ny mpampiasa ny hiditra ao amin'ny lisitry ny mailaka izahay dia hahazo mailaka izay misy ny vaovao momba ny orinasa, fanavaozana, vokatra momba ny serivisy na serivisy, sns .. raha amin'ny fotoana rehetra dia te-tsy hisoratra anarana ny mpampiasa raha tsy mahazo mailaka ho avy, ampidirintsika ao ny antsipiriany ny torolalana tsy manoratra amin'ny ilany mailaka tsirairay na ny mpampiasa dia afaka mifandray aminay amin'ny alalànay.
Ny fomba iarovantsika ny fampahalalana anao
Noraisinay ny fomba fanangonana rakitra, fitahirizana ary fanodinana ary fepetra fiarovana hiarovana amin'ny fahazoana alalana, fanovana, fanambaràna na fanimbana ny mombamomba anao, ny anaranao, ny tenimiafina, fampahalalana momba ny fifanakalozana ary angon-drakitra voatahiry ao amin'ny tranokalanay.
Ny fifanakalozana data momba ny saina sy ny tsy miankina eo anelanelan'ny Tranonkala sy ireo mpampiasa azy dia mitranga amin'ny fantsom-pifandraisana azo antoka SSL ary voahodidinina sy arovana miaraka amin'ny sonia nomerika.
Mizara ny mombamomba anao manokana
Tsy mivarotra na mivarotra, na manofa mombamomba ny fampahafantarana manokana an'ny mpampiasa izahay amin'ny hafa. Azontsika atao ny mizara fampahalalana demografika goavambe tsy mifamatotra amin'ny fampahafantarana momba ny mpitsidika sy ny mpampiasa amin'ny mpiara-miasa aminay, mpiara-miasa azo antoka ary mpanao doka ho an'ny tanjona voasoritra etsy ambony. Azontsika atao ny mampiasa mpamatsy tolotra fahatelo ho fanampiana anay hampiasa ny orinasantsika sy ny Site na mitantana asa atao ho anay, toy ny fandefasana gazety na fanadihadiana. Azontsika atao ny mizara ny fampahalalana anao amin'ireto antoko fahatelo ireto noho ireo antony voafetra nomenao ny fahazoan-dàlana anao.
Tranonkala fety fahatelo
Ireo mpampiasa dia mety mahita dokam-barotra na votoaty hafa ao amin'ny tranokalanay izay mampitohy ireo tranonkala sy serivisy ho an'ny mpiara-miombon'antoka, mpamatsy, dokambarotra, mpanohana, mpahazo lalana ary misy fety fahatelo. Tsy fehezinay ny votoatiny na rohy hita ao amin'ireny tranokala ireny ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fanao ampiasain'ny tranokala mifamatotra na avy amin'ny tranokalanay. Ankoatr'izay, ireo tranonkala na serivisy ireo, ao anatin'izany ny atiny sy ny rohy, dia mety miova tsy miova. Ireo tranonkala sy serivisy ireo dia mety manana ny politikany manokana sy ny politikan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ny alàlan'ny fampielezana sy fifaneraserana amin'ny tranokala hafa, anisan'izany ireo tranonkala izay manana rohy mankany amin'ny tranokalanay dia miankina amin'ny fepetra sy ny politikany manokana.
Fanovana ny politikam-piainan'ny fiainana manokana
Fyrebox Quizzes Ltd dia manana ny fahazoan-dàlana hanavao izany politika momba ny fiainana izany amin'ny fotoana rehetra. Rehefa manao izany dia havaozina ny daty havaozina eto ambany farany eto amin'ity pejy ity ary handefa mailaka anao izahay. Amporisihinay ny mpampiasa azy hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana ilaina hampahalalana momba ny fanampiana ny fiarovana ny mombamomba manokana angoninay. Ekenao ary ekenao fa anjaranao ny mandinika tsindraindray ity politikanao momba ny fiainana manokana ity ka ho tonga saina amin'ny fanovana.
Ny fanekenao ireo teny ireo
Raha manana fanontaniana momba ity Politika momba ny fiainana manokana ity ianao, ny fanaon'ity tranokala ity, na ny fifandraisanao amin'ity tranokala ity, azafady mba hifandraisanao aminay:
Nohavaozina farany tamin'ny 9 martsa 2020 ity taratasy ity